ओमकार टाइम्स केपी ओलीको गफ र कांग्रेसी मेयरको काम, कम्युनिष्ट बने चकित ! – OMKARTIMES
केपी ओलीको गफ र कांग्रेसी मेयरको काम, कम्युनिष्ट बने चकित !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न । ओली भाषण गरिरहेका हुन्छन् तर उनी आसपासमा व्यक्तिहरु विभिन्न खालका अनियमिततामा फसिरहेका हुन्छन् । यसको उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन, उनकै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र बालुवाटार प्रकरणलाई हेरे पुग्छ ।
तर, उर्लावारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागोको कथा भने छुट्टै छ । उनले कार्ययोजना नै बनाएका छन्, एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने । ‘मैले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन । अनियमितता गरेर हामीले पनि केही पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा कसैले नराखे हुन्छ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।
एक रुपैयाँ दायाँबायाँ गर्न दिन्नँभन्दा विरोध हुन्छ भने त्यसको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा उनले जनतामा छोडेका छन् । जनताको काम गर्न रात दिन नभनी खट्ने गरेका फागोले आफ्नो कार्यकाल पारदर्शीरुपमा विताउने योजना बताएका छन् ।
२०७६ श्रावण २७
काठमाडौंमा भर्खरै गयो भूकम्प
महिलालाई श्रीलंका पुर्‍याएर बेच्ने झापाका एक व्यक्ति पक्राउ
जंगी अड्डामा ‘पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र’ स्थापना
आज नागरिक स्तरबाट देशभर पृथ्वी जयन्ती मनाइदै
आज थप ४ सय ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ जनाको मृत्यु
साँढे गोरुको आक्रमणबाट एक वृद्धाको मृत्यु
प्रचण्डलाई एक हजार बर्ष जेल हालेपनि कम हुन्छ : राजेन्द्र महतो
हुस्सुका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित
प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री सहित ८ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गरेको प्रचण्ड – माधव पक्षको दाबी